တိုးတက်လာတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တိုးတက်လာတယ်
Posted by မောင် ပေ on Jan 24, 2013 in Creative Writing | 17 comments
စားပြီးရင် ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ တဲ့
ပိုက်ဆံပေးဝယ်ဖတ်ရတဲ့ ဂျာနယ်တွေနဲ့ 
တစ်နေ့ တစ်မျိုး ရေးနေကြတာတွေ
ပထမဦးဆုံး ကွန်မင့် ဈေးဦးဖောက်ပေးတာအတွက် ရှဲရှဲပါ
အမလေး ကိုပေရယ်.. မသောက်ပဲမူးတယ်ဆို တာ နဲ.တဲ့ကုသိုလ်ကံမဟုတ်ပါလား..
ကျွန်တော်မန်းလေးလာရင် တွေ.ကြမယ်ဗျို. ရယ်ဒီနော်.ဟဲဟဲဟဲ
ကြုံရင်လာခဲ့ မပြော မမြင် မကြား ဆိုတဲ့စာ သရုပ်ဖော်တက်တူးလေးထိုးပေးမယ်
အဲ ဖတ်ကြည့်ပြီး ဘာပြန်ပြောရမှာလည်းမသိတော့ဘူး။ဒီတော့
ဘဂျီးပေရယ် ဂျာနယ်သမား တင်မကပါဘူးဗျာ လူတွေပြောနေဒါတွေကိုဂ ဒီလိုပါပဲ
နွားစီးတဲ့သားအဖပုံပြင်လိုပေါ့ဗျာ စီးတော့စီးပြန်ပြီး မစီးတော့မစီးပြန်ဘူး မလွတ်တမ်းပြောတာပါပဲ
ဘယ်သူပြောတာမှန်တယ် ဘယ်သူပြောတာမှားတယ်ဆိုတာတော့ မိမိဖာသာဆုံးဖြတ်ပြီး
မိမိ အဆင်ပြေသလို ကျင့်ကြံနေထိုင်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်လို့ ထင်မိပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးး
အဲဒါတွေကတော့ ဘယ်ဟာမှန်တယ်လို့ ကျုပ်မသိဘူးဗျာ
ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကိုယ်လုပ်။ (ကိုယ်ဖြစ် ကိုယ်ခံ)
အော်ပီကျယ်ရဲ့ ကျကျမ်းကို များများဖတ်။
“လုပ်သင့်တာထက် လုပ်ချင်တာ ဦးစားပေးပါ”
ဒီလိုတွေ့ နေရတာ မရူးအောင်သတိထားရမယ်
သတင်းတွေအကြောင်းကတော့??????
လူ့ဘောင်ကြီးမှာ အညာတွေ ပါတ်
ဖာထုတ် (ထန်းခေါက်ဖာကိုပြောတာနော… )
ကာဖုတ် (ထန်းပင်မြစ် ကို လေကာပြီး မီးဖုတ်ပေါ့)
ဆရာပေရေ ကျန်းမာရေး သုတေသီတွေကလည်း အမြဲစမ်းသပ်နေတော့ အကျိုးအပြစ်တွေကလည်း အမြဲပြောင်းလဲနေသလို ရောဂါဆန်းတွေလည်း အမြဲပေါ်နေတာဘဲလေ။ အဲဒါတွေကို ရေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေကျတော့ အမျိုးမျိုးရေးတယ်ဖြစ်ရော အမှန်တော့ သုတေသီတစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့မတူ ပေမယ့် ရေးတဲ့သူ ကျတော့ သွားတူတာကြောင့်ပါ။
ဥပမာတစ်ခုရေးပြမယ်- ကော်ဖီကို သောက်ခြင်းဟာ ကော်ဖီမှာပါတဲ့ ကဖင်းက အသည်းကိုထိခိုက်စေတယ် လို့ ပထမသုတေသီက သူရှာတွေ့တာပြောတယ်၊ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ရေးမယ် ကော်ဖီသောက်တာ မကောင်းဘူးလို့။ ဒုတိယ သုတေသီက ကော်ဖီမှာပါတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးက ကင်ဆာဖြစ်ဖို့ပေါက်ဖွားတဲ့ ဆဲလ်တွေ ကို တားစီးနိုင်စွမ်းရှိတယ် အထူးသဖြင့် ရင်သားကင်ဆာနဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာတွေ ဖြစ်မှု့ကို ကာကွယ် တယ်မို့ ကော်ဖီသောက်သင့်တယ်လို့ သူတွေ့ရှိချက်ကို ပြောတယ်၊ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ရေးပြန်တယ် ကော်ဖီသောက်သင့်တယ်၊ အဲဒီတော့ မသောက်သင့်ဘူးပြောတဲ့ ပထမသုတေသီက ပြန်စမ်းသပ်ပြီး သူတွေ့ရှိ ချက်ကို ပြောတယ်၊ အဲဒီတော့လည်း update သတင်းမို့ ကျွန်တော်တို့က ရေးပြန်တယ် ကဖင်းမှာပါတဲ့ဓာတ် တစ်မျိုးက ကင်ဆာမဖြစ်ဖို့ အထောက် အပံဖြစ်လို့ ကော်ဖီသောက်သင့်တာမှန်ပေမယ့် တစ်နေ့ကို ကဖင်းပါ တဲ့ ကော်ဖီ၊ လက်ဘက်ရည်ကို တစ်နေ့ ၃ ခွက် ထက်ပိုပြီးမသောက်သင့်ဘူး ၃ ခွက်ထက်ပိုသောက်ရင် ကဖင်း ဓာတ်များလို့ အသည်းထိခိုက်ပါတယ်လို့။ အဲဒီတော့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကပြောတယ် အမျိုးမျိူးရေးနေကြ တာဘဲလို့။ အဲလိုဖြစ်တာပါဗျာ။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်ဖာကိုယ်ဘဲ ဆုံးဖြတ် ကာ နေသာသလိုသာနေပါလို့ဘဲ ပြောရတော့မယ်ဗျာ။
ယောနိသောစိတ်ထားပီး မဇ္ဇျိမအတိုင်း လေးသာနေပေ့ါ ကပေရေ့ :hee:
ကပေ ရေ…။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်ဖတ်နေကျ နစ်နိမ်း မဟုတ်ရင်ကျော်သွားတာများတယ် …။ ခေါင်းစဉ်ကိုစိတ်မ၀င်စားရင်လည်း ဘယ်သူရေးဖြစ်နေပါစေ ကျော်သွားလိုက်တယ် …။ တွေ့သမျှ အကုန်လိုက်ဖတ်နေရရင် ညစာချက်စားရမှာမဟုတ်တော့လို့ ………..